Baya kana hunyanzvi hwekunyengedza kweAfrica - Afrikhepri Fondation
svondo, january 24, 2021
Baya kana hunyanzvi hwekunyengera kweAfrica
Po kunyenga murume, vakadzi vane matipi akati wandei. Mumwe nemumwe anosarudza zvinoita senge chinonyanya kushanda. Make-up, mbatya, magadzirirwo ebvudzi anouya kuzoshongedza kuratidzira kwavo. Dzimwe nzira ndedzepasirese. Zvimwe zvakanangana nevanhu. MuAfrica, ichi chidiki chinhu ndicho icho.
Iwo aya iseti kana chishongo chemaparera chinoshandiswa nevakadzi vemu Africa sechishongo chehudyu yavo. Affléma muAakani kana Baya muMalinké. Iyo ine chinangwa chakati: Kunyengerera.
Baya kana afflema inogadzirwa nemhando dzakasiyana mbishi senge porcelain, rabha, tsvina yemhando isingawanzo rehwa butterfly, dombo uye huni. Aya maparera anowanzo kubva kuIndochina, Morocco neRebhanoni. KuWest Africa, aya anoti Mali, Senegal, Nigeria neGhana. Iwo aya anogadzirwa muSenegal nemaLaoubè avo vari vaFulani.
Kuti uwedzere masimba asinganzwisisike eaya, zvinokurudzirwa kushandisa pefiyumu, iyo nimmalinun Oussounan, zvinoreva kuti muchiWolof "ndinodhakwa". Iyo inoshandiswa kupingisa uye kuchengeta mumwe wako pamba. Vakadzi veSenegal neMaliya vane yavo yakavanzika yekupedzisira: Ivo avo. Ndezvipi zvino zvekutaura nezve vakadzi vechi Akan vane mwanasikana wavo akaiswa pane egoridhe ayahs mukati memavhiki ekutanga emuchato wake?
Mhuri yemwenga, zvirinani kunyengerera mukuwasha wavo, inoshongedza muviri wemwanasikana wavo nemaparera. Huru tsvuku dzinoshandiswa kutsigira Kodjo. Kune mamwewo marozari emabvi nepamberi. Zvinokurudzirwa kupfeka iwo aya nePindal betchô chinova chidimbu chejira rakasvika kusvika pamabvi chete. Mwenga mutsva anofanirwa kuratidza maparera ake matsvuku panguva diki diki pamberi pemishumo chaiyo. Aya ese matipi anoitirwa chete kunyengera.
Sekuona kwedu, iwo aya zvakare aphrodisiac inoita kuti varume varasikirwe nemisoro yavo kunze kwekuva chinhu chekudzivirira kubva kumweya yakaipa. Asi nekuvandudza kwemazuva ano, kushongedzwa uku kuri kurasikirwa nehunhu hwayo mukufarira ngetani dzinoshandiswawo nevakadzi muchiuno. Nguva dzose nechinangwa chega chekunyengera.
An article kubva Mitemo ye Africa
Vamei 18pcs Pearl Cheka Zvishongo Zhizha Zhizha Rakaisa Rakajeka Africa Dura Pearl Pearl Mabheji ...
Yakapedzisira kugadziridzwa muna Ndira 23, 2021 2:17 PM